Musharaxa Madaxweynaha Xisbiga UCID Jamaal Cali oo Magacaabay Xoghayaha Guud ee xisbiga – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Jamaal Cali Xuseen Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID ayaa maanta shir jaraa’id oo uu qabtay waxa uu ku magacaabay xoghayaha guud ee xisbigaasi oo sheegay in magacaabistiisa ay xaq u leeyihiin garabkiisu.
Musharaxa Jamaal Cali Xuseen oo magacaabaya xoghaya guud ayaa yidhi, “Maanta waxaan halkaa ka magacaabayaa xoghayihii guud ee xisbiga oo aan anagu lahayn garabkayagu oon u magacaabay Aadan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo ah ninkan igarab taagan. Maanta laga bilaabo xoghayaha guud ee xisbiga UCID Md. Aadan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo maxkamadu noo siisay in garabkayagu aanu magacaabi karno”.
Jamaaal Cali Xuseen ayaa sheegay inuu isagu hore u magacabaay xoghayihii hore ee xisbigaasi oo ahaa Kayse oo haddda ah wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arimaha Dibadda Somaliland.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee Musharax Jamaal Cali Xuseen ku magacabaay xoghayaha guud ee xisbiga oo aanu ka oo xiganay Mire Media: